नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा देखिन थाल्यो नयाँ संकेत, एमालेको रणनीतिमा यसकारण फस्न सक्छ कांग्रेस ! « Surya Khabar
नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा देखिन थाल्यो नयाँ संकेत, एमालेको रणनीतिमा यसकारण फस्न सक्छ कांग्रेस !
काठमाण्डौ । मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै मुलुकको राजनीतिक परिदृष्यमा केही परिवर्तन हुने संकेत देखापरेका छन् । सोमबार दुई नम्बर प्रदेशमा तेश्रो चरणको स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएको छ ।
दुई नम्बर प्रदेशको राजनीतिक रस्साकस्सी सकिएसँगै राजीतिक दलहरु आगमी मंसिरमा हुने संघीय संसद र प्रदेशसभा निर्वाचनमा केन्द्रीत हुँदैछन् । आगामी मंसिरमा हुने चुनावमा कुन दलको राजनीतिक रणनीतिक कस्तो होला ? र कसले बाजी मार्ला भन्ने आंकलन गर्न अहिले केही हतारो भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका परिदृष्यहरुले त्यसको संकेत दिइसकेको छ ।
वास्तवमा पहिलो र दोश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६ वटै प्रदेशमा नेकपा एमालेले अग्रस्थान हासिल गर्न सफल भयो । दोश्रोमा कांग्रेस र तेश्रो स्थानमा माओवादी केन्द्र पुग्यो ।
पहिलो र दोश्रो तहको चुनावमा अपेक्षित परिणाम नआएपछि तेश्रो चरणको चुनावका लागि नेपाली कांग्रेसले राम्रो मेहनत गरेको देखिएको छ । उसैपनि दुई नम्बर प्रदेश नेपाली कांग्रेसको राम्रो प्रभाव भएको क्षेत्रमा पर्दछ ।
त्यहाँको मतपरिणाम कस्तो आउँछ, एकदुई दिनमै थाहा हुँदैछ । नेपाली कांग्रेसको सिंगो नेतृत्व दुई नम्बर प्रदेशको चुनावमा खटिरहँदा पराजय बेहोर्नुपरेका अन्य ६ प्रदेशमाचाहि आगामी मंसिरको चुनावका लागि उसले के गर्दैछ ।
पहिलो र दोश्रो चरणको चुनाव सकिएको करिब ८ महिनापछि संघीय संसद र प्रदेशसभाको चुनाव हुँदैछ । भर्खरै आएको स्थानीय तहको मतपरिणामले ती क्षेत्रमा कत्तिको प्रभाव पार्छ ? यो विषयमा नेपाली कांग्रेसले ध्यान दिएको देखिदैन ।
नेपाली कांग्रेसको सिंगो नेतृत्व दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव खट्यो, अब लगत्तै हिन्दुहरुको महान चाड दशै,तिहार र छठ पर्व लगातार आउँदैछन् । त्यसबेला सबै नेता, कार्यकर्ता र जनता चाडपर्वमा व्यस्त हुँदैछन् । त्योबीचमा राजनीतिक दलका गतिविधिहरु कसरी अघि बढ्छन्, त्यसले आगामी चुनावको मतपरिणामको भाग्य र भविष्यको फैसला गर्छ ।
यो बीचमा एमालेले आगामी असोज ६ गतेदेखि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रधामन्त्रीको उम्मेद्वार र सिंगो ७ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु तय गरेर अघि जाने निर्णय गर्दैछ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र अन्य दलहरुले पनि यो खालका निर्णय गर्लान् ? तर दुई नम्बर प्रदेश बाहेक ६ प्रदेशमा ब्रेक भएको साखलाई माथि उठाउने ढंगले कांग्रेसले योजना बनाउनुपर्ने सो पार्टीका नेता,कार्यकताहरुको दाबी देखिन्छ ।
माओवादीसँग भएको चुनावी तालमेललाई खासै नरुचाएका कांग्रेस कार्यकर्ताहरुको समुह पनि निकै ठूलो देखिन्छ । यो सवालमा समेत कांग्रेसले ध्यान दिनुपर्ने बहसहरु उठान भएका छन् ।
वास्तवमा नेपाली कांग्रेसका गढ क्षेत्रका रुपमा चिनिने दुई नम्बर र सात नम्बर प्रदेशमात्र होइन अन्य पाँचवटै प्रदेशमा सो पार्टीले थप मेहनत गर्नुपर्ने सुझावहरु आइरहेका छन् । त्यसर्थ, पनि सो पार्टीले तय गर्ने भावी राजनीतिक रणनीतिले उसको भविष्य निर्धारण गर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरुको प्रभाव रहेका स्थानमा स्वत प्रभाव हुने र नभएका स्थानमा थप संगठन सुदृढिकरणका अभियानलाई अघि बढाउन कञ्जुस्याई गर्न नहुने जानकारहरुको सुझाव छ ।
एमालेको रणनीतिमा सतर्क रहन सुझाव !
नेकपा एमालेका नेताहरुका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुले एउटा संकेत दिन थालेका छन् । उनीहरुले कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनलाई रुचाएका छैनन् । आइतबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमाले नेता योगेश भट्टराइले कांग्रेस र माओवादीको चुनावी तालमेलबारे कडा आलोचना गरे ।
त्यस्तै सो पार्टीका अध्यक्ष ओली लगायतका नेताहरुले पनि तालमेलबारे कडा आलोचना गर्दै आइरहेका छन् । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने एमाले आगामी मंसिरको चुनावमा कांग्रेसलाई धक्का दिने आन्तारिक रणनीतिमा लागेको छ, यो कुरा नेपाली कांग्रेसले बुझेर आफ्नो रणनीति बनाउनुपर्ने धेरैको सुझाव छ ।
एमालेको रणनीतिमा यसकारण फस्न सक्छ कांग्रेस ! नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा देखिन थाल्यो नयाँ संकेत
सङ्ग्रहालयको निरीक्षणपछि मन्त्री आलेले भनेः दोषी ठहरिएका सबैलाई कारबाही हुन्छ
अव्यवस्थित सहरीकरण नै भूकम्पीय जोखिमको प्रमुख कारणः प्रधानमन्त्री देउवा
थप चार हजार ९६१ मा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि, काठमाडौँ उपत्यकामा…
शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगः मच्छिन्द्र विजयी
महाधिवेशनपछि पार्टीमा कुनै असहजता छैन– काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य गच्छदार
पशुपतिमा गैरकानूनी धर्मशाला निर्माण गर्ने बतास समूहलगायतलाई कारबाही गर्छुः मन्त्री…